Nordwind Airlines Inodzoreredza Ndege Kubva St Petersburg KuStuttgart
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nordwind Airlines Inodzoreredza Ndege Kubva St Petersburg KuStuttgart
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Basa remhepo pakati peSt. Petersburg neStuttgart richavhurwa kubva Nyamavhuvhu 22 nemusi weSvondo.
Nordwind Airlines ichatangisa ndege kuHannover kubva muna Nyamavhuvhu 18.
Nordwind Airlines ichatangisa nendege kuFrankfurt am Main kubva muna Nyamavhuvhu 19.
Ndege dzinoenda Hannover dzichaitwa vhiki nevhiki neChitatu uye kuFrankfurt am Main neChina.
Northern Capital Gateway, manejimendi kambani ye Pulkovo Airport muSt. Petersburg, Russia yakazivisa mutakuri weRussia wekutandara Nordwind Airlines ichatangisa nendege yakananga kubva kuPulkovo Airport kuenda kuGerman Stuttgart kutanga Nyamavhuvhu 22, 2021.
“Sevhisi yemhepo pakati peSt. Petersburg neStuttgart ichavhurwa kubva Nyamavhuvhu 22 nemusi weSvondo. Nguva yekufamba inenge iri maawa matatu, ”yakadaro kambani.
Iyi inzvimbo nyowani yekuenda kunhandare yendege kubvira panguva yakaunzwa zvine chekuita nemakoronavirus, sevhisi yekudhinda yeNorthern Capital Gateway yakati.
Nordwind Airlines ichatangisawo dzimwe ndege mbiri dzakarongwa kuenda kuGerman, kuenda Hannover kubva Nyamavhuvhu 18 uye kuenda kuFrankfurt am Main kubva Nyamavhuvhu 19.